Infero ny fitarihana vaovao: hamantatra ary alefaso ireo mpitarika tsara indrindra amin'ny Salesforce | Martech Zone
Sahirana ireo orinasa handika ireo rakitsoratra momba ny mpanjifany sy ny antony manosika azy ireo. Tsy azo atao mihitsy ny mahita ny ala avy amin'ireo hazo rehefa mifantoka amin'ny rafitry ny firaketana an-tsoratra vs. mamoaka hevi-javatra mahasoa avy amin'ny signal rehetra amin'ny rafitra tsy mitovy toa ny Salesforce, Marketo ary Google Analytics, ary ireo loharano tsy voarindra avy amin'ny tranonkala ny olona.
Vitsy ny orinasa manana ny loharano na ny fahaizany mitrandraka ny angon-drakitra sy mampihatra azy ireo Analytics mamaritra izay prospect hividy ny vokariny, ary oviana. Ireo izay manandrana mamaha ny fanamby amin'ny alim-pandrefesana firaketana ao amin'ny rafitry ny automatisation marketing dia tokony hamaritra amin'ny tanana ireo fitsipika mifototra amin'ny fikajiana ny tsinay sy ny ampahany kely amin'ny hetsiky ny mpampiasa.
Ary raha misy orinasa sasany manana fitarihana fidirana anaty fidirana maharitra, ny sasany kosa miankina amin'ny varotra ivelany sy ny varotra kendrena hitarika fitomboana. Ny fomba fanao mahazatra indrindra dia ny mividy lisitr'ireo fitarihana mampiahiahy ary manantena ny hahita vina kely vitsivitsy, saingy mitaky fotoana sy vola be izany.
Ahoana no tsy itovizan'ny isa amin'ny faminavina mialoha amin'ny isa isa nentim-paharazana amin'ny automatisation marketing?
Raha tokony hanisy teboka amin'ny tanana ho an'ny hetsika nomena iray izahay, ny maodelim-pahaizana momba ny fitondran-tena momba ny fitondran-tena dia mampiasa fianarana milina matanjaka mba hitrandrahana ny habetsaky ny angon-drakitra hetsika ao anatin'ny sehatra fanodinana varotra orinasa iray. Ny ekipa mivarotra sy mivarotra dia afaka mampiasa isa amin'ny fitondran-tena mba haminavina izay prospect hiova fo ao anatin'ny telo herinandro.
Ahoana no hamahan'i Infer azy ary misy fomba fanao tsara indrindra mifandraika amin'ny fampiharana?
Mamoaka vinavinan'ny mpanjifa marina sy voaporofo ara-statistika izahay mandritra ny dian'ny mpanjifa, izay manampy ireo orinasa hahatratra fiakarana avo lenta amin'ny tahan'ny fandresena, fiovam-po, fitomboan'ny haben'ny fifanarahana ary fidiram-bola miverimberina. Ny maodelintsika mety dia maminany mialoha Analytics ary mianatra milina mandroso hahafantatra raha misy olona mahay mividy vokatra iray ary ny maodelin'ny fitondran-tenanay dia mamaritra raha toa ka hividy tsy ho ela izy ireo.
Izahay dia manao izany amin'ny alàlan'ny famakafakana ireo mari-pamantarana lehibe - toy ny maodelin'ny orinasan'ny orinasa, mpivarotra teknolojia, fandefasana asa mifandraika, fampirimana imasom-bahoaka, fisian'ny fiaraha-monina, hetsiky ny tranokala, angon-drakitra momba ny automatisation marketing, angona fampiasana ny vokatra, ary toetra hafa. Hitanay fa ny mpanjifanay dia mamaha ny sandany indrindra rehefa mampiasa Infer izy ireo mba tsy hanivana sy hanao laharam-pahamehana fotsiny ny tanjon'izy ireo, fa kosa hanatsara ny fanentanana amin'ny marketing, hanatsara ny varotra ivelany, hamorona fitarihan-doha fitarihana, fifanarahana ambaratonga momba ny serivisy amin'ny varotra sns. Ny fanazaran-tena hitanay fa ampiasain'ny orinasa dia matrix 4X4 tsotra sy matrix scéture fitondran-tena izay manampy azy ireo hamolavola programa manodidina ny faritra samihafa, ohatra amin'ny alàlan'ny fandefasana fitarihana mety indrindra, azo inoana hovidiana mivantana any amin'ny repoblikan'izy ireo ambony.
ny Mahatarika fitarihana vaovao-vaovao Ny fanomezana dia manome ekipa mpivarotra loharanom-pahalalana vaovao avo lenta amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpamatsy angon-drakitra ambony toy ny InsideView, ary ny fampiasana modely vinavina manokana hamantarana ireo fitarihana mety indrindra amin'ny orinasa. Ny ekipa mpivarotra dia matetika nampiasa Infer mba hanome isa ny lisitra mitarika azy manokana, fa ankehitriny izy ireo koa dia afaka mividy fitarihana vaovao vaovao avy aminay mivantana, mampiasa ireo maodelinay manokana natao mba hanomezana isa ny fifandraisana mangatsiaka ary handoa ny kaonty tsara indrindra ihany.
Inona avy ireo mpanavakavaka fototra an'ny Infer?
Tsy manam-paharoa isika eo amin'ny sehatry ny vinavina mialoha noho ny antony roa - voalohany sy lehibe indrindra noho ireo vokatra mikajiana vinavina saina tsy manam-paharoa. Ny ADNantsika dia kolontsaina injeniera matanjaka avy amin'ny Google, Microsoft ary Yahoo. Ratsy toetra izahay amin'ny fahazoana angon-drakitra sy ny fikarohana ireo faritra izay ahafahan'ny siansa angona manokatra ny sandany indrindra amin'ny varotra B2B sy ny marketing.
Ny tanjon'ny Infer dia ny manampy ireo orinasa hitombo amin'ny herin'ny siansa data. Ny faharanitan-tsaintsika mialoha dia manampy amin'ny fampiharana fampiharana maro samihafa ho an'ny varotra sy marketing:
sivana - Fantaro avy hatrany ny fitarihana tsara raha manivana ny tabataba rehetra (fitarihana ratsy).
Prioritization - Ataovy izay laharam-pahamehana mba hifantohan'ny Sales amin'ny prospect izay mampiseho signal mividy mahery ary mety hisy fiatraikany lehibe indrindra.
Fitaovana vaovao-vaovao - Fivarotana ivelany amin'ny alàlan'ny famaritana ny fitarihan'ny orinasa mety indrindra izay tsy ao anaty ny angon-drakitrao.
mikolokolo - Ny Monitor dia mitarika amin'ny tahiry fikolokoloana handefasana ireo vinavina hiverina amin'ny varotra raha vao miditra indray izy ireo.
Exec Dashboard - Tariho ny fanapaha-kevitra, jereo ny fironana vao misondrotra, ary araho hoe hatraiza ny famokarana fitakiana mandrehitra ny fantsom-pianaranao
Satria ny tanjonay dia tsy ny hanangana orinasa mpanolotsaina velively, nijanona tamin'ny laser tamin'ny fahombiazan'ny modely izahay ary nitondra valiny mahomby sy miverimberina ho an'ny mpanjifantsika fa tsy miankina amin'ny serivisy. Izany no antony anentananay ny fanaovan-tsakafo fifaninanana ary avelantsika samy hanana ny hatsaran'ny teknolojia sy ny injeniera ary ny fahombiazan'ny maodely.
Tags: infermitarika fitarihana vaovao vaovaoscoring firakafitarihana vaovaovinavina Analyticsisa azo vinavinainasalesforce
Sean dia mamolavola ny paikady fametrahana, fandefasan-kafatra ary amin'ny ankapobeny ho an'ny tsindrin-tsarin'i Infer momba ireo modely mpandinika vinavina ho avy. Vantany vao afa-po Infer mpanjifa tenany, Sean dia niditra tao amin'ny Infer avy amin'ny orinasa rindrambaiko fitantanana antontan-taratasy any San Francisco, izay namolavola sy nitarika ekipa marketing eran-tany nahazo loka. Sean dia manana mari-pahaizana mandroso avy amin'ny Suffolk Sawyer School of Business sy Northeast atsinanana amin'ny varotra stratejika sy ny fitantanana tetikasa.